Fandrosoana isan-tokantrano : Hihaino sy hiezaka hamaha ny olana eny ifotony ny Filoham-pirenena -
AccueilRaharaham-pirenenaFandrosoana isan-tokantrano : Hihaino sy hiezaka hamaha ny olana eny ifotony ny Filoham-pirenena
Mitohy ny asa ataon’ny fitondrana amin’ny fampandrosoana. Anisan’izany ny fanarenana vokatry ny rivodoza AVA, ka anisan’ireo natao haingana ny fanarenana ireo lalam-pirenena (faha-2, 34 ary 25) ny fanoloana ireo tetezana tapaka toa ny tany Vohiposa (RN 7) sy tany Mandrota (RN44). Miantoka ny ain’ny firenena sy ny sehatr’asa samihafa ny angovo, ka nahatonga ny filoha Hery Rajaonarimampianina nilaza fa « lesona azo tsoahina ny fandrantsanana ireo hazo manamorona ny andrin-jiro hialana amin’ny fahatapahana sy ny fanelingelenana amin’ny famatsiana angovo ».
Mitohy ihany koa ny fampahafantarana ireo zava-bita, indrindra ireo fotodrafitrasa maharitra sy mirindra ary ny fanamboarana vaovao. Misy ny efa an-dalam-panamboarana izay mila arahi-maso. Maro ireo ezaka efa vitan’ny fitondrana ankehitriny toa ny fametrahana fotodrafitrasa ho an’ny angovo, fanamboaran-dalana, ho an’ny fahasalamana, sekoly, kaominina, ary tobin’ny mpitandro filaminana. « Heverin’ny sasany fa kely ireny fa malagasy maro an’isa no misitraka izany », hoy hatrany ny Filoha. « Tsy fitokanana fe-fitokanana fotsiny no atao fa ny fanomezana hasina ny tena fampandrosoana », araka ny fanamarihan’ny Filoha. Ohatra nomeny tamin’izany ny fanamboaran’ny fitondrana toho-drano hanondraka tanimbary. Fotodrafitrasa ho an’ny fambolena hialana amin’ny fanafaram-bary. Mikasika izay vary izay dia nitsidika ny seranan-tsambon’i Toamasina ihany koa ny Filoha nijery ireo vary tonga. « Misy ny mpanararaotra, ary tokony samborina sy gadraina ireo mihoa-pefy. Mila mandray andraikitra ireo manam-pahefana isan’ambaratongany. Tsy eo amin’ny vidim-bary ihany fa sehatra maro ara-pihariana sy ara-tsosialy », hoy hatrany izy.
Ankoatra izay, dia niaiky ny Filoha fa na niasa aza ny ezaka vita, dia mbola maro ny tokony hatao ho fanomezana vahaolana eo noho eo satria be loatra ny fahavoazana. « Hanohy ny fihainoana eny ifotony aho, ary hamaha olana araka izay tratra » hoy hatrany izy. Navoitra tamin’izay famahana olana haingana izay ny fanolorany drafi-panarenana raha nihaona tamin’ny foko Zafimaniry izy, ka nijery ifotony sy nihaino ny fahasahiranan’izy ireo andavanandro. Nianga tamin’ny fahaizan’ny Zafimaniry taozavatra izany, ary toa izany koa ny famokarana « ethanol » avy amin’ny fary ahodina angovo sy hampihenana ny fikapana ala hiarovana ny tontolo iainana. Toa izany koa ny fanomezana Baiko ny BNGRC amin’ny fanatanterahana ireo asa vonjitaitra sy ny fanamboarana ny kianja mitafon’i Soavita tany Toamasina tao anatin’ny fotoana fohy.
Ankoatra ny voka-dratsy navelan’ny rivodoza, dia anisan’ny tranga iray sedrain’ny fitondrana ihany koa ny fanenjehena sy ny fanaratsiana samihafa. Antony nahatonga ny filoha Hery Rajaonarimampianina nanao antso avo amin’ny rehetra handanjalanja ny zava-misy. « Tsy izay rehetra lazaina hanaratsiana ny mpitondra dia marina avokoa. Miantso ny tsirairay handinika sy hamakafaka tsara vao maneho hevitra », araka ny fanamarihana nentiny. « Tsy azo inoana ny fanambarana ataon’ny olona voaheloky ny fitsarana malagasy amin’ny heloka bevava , nefa nitsoaka ny fonja sy manala-baraka ny firenena. Tsy ho vitavita ho azy izany fa mitohy ny fanenjehena », hoy izy raha nanao tsidika fohy ilay teratany frantsay Houcine Arfa.